ကလိုစေးထူး: ကျနော်နှင့် တင်းနစ်ကွင်းကလေး..
It isanice post. lovely. In front of my apartment, there isabasketball court too. I was even thinking how many burmese know how to play basketball. I don't think this sport is for high class ppl. Most probably for tall ppl. I can't play/jump ofcouse bcoz basket is always 3m above the floor :-)
(Loimwethu)sorry I dont ownablog.
Mar 31, 2007, 1:58:00 AM
ကိုကလိုစေထူး ... ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြေးတဲ့ ကစားနည်းဟာ အမောဆုံးထဲ မပါဘူးလားး) တင်းနစ်ဘောလုံးလေးမြင်ပြီး တွေးတဲ့ အတွေးကို သဘောကျတယ် ။ ဆောင်းတွင်း နှင်းတွေ ဖွေးနေတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကိုလည်း သ်ိပ်ကြိုက်တယ် ။
Mar 31, 2007, 2:14:00 AM
ကျမကတော့ တင်းနစ် ပလေယာတွေထဲကဆိုရင် ရှရှားတင်းနစ်မယ် မာရီယာ ရှရာပိုဗာကို ကြိုက်တယ်ရှင့်။ ကိုသံလွင်တို့လို ကာလသားများလည်း ကြိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့။ သူက စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် မဟုတ်လား။ လာမယ့် ဧပြီ ၁၉ မှ သူ့ အသက်က ၂၀ ပြည့်မှာတဲ့။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ထူးချွန်တဲ့ မိန်းကလေးပဲနော်။
အင်း .. ကိုသံလွင်ပြောသလို ကျမတို့ဟာ တင်းနစ် ဘောလုံးလေးသာဆိုရင် ပြိုင်ဘက် နှစ်ယောက်ကြား (တခါတလေ လေးယောက်ကြား) ဗျာများနေတဲ့သူတွေလို ဖြစ်လေမလား စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ သူတို့အနိုင်ရဖို့ ကိုယ်က အနာခံရသူ (ဓားစာခံလိုမျိုး)များ ဖြစ်နေလေမလား … လို့။
ဘာရယ်မဟုတ်ဖူး .. ကိုသံလွင့်စာဖတ်ပြီး လျှောက်တွေးကြည့်တာ။ အဲဒီလိုသာ ဆိုရင်တော့ … မစွံပါဘူး။
Mar 31, 2007, 4:11:00 AM
ဂျစ်တူး.. မာရသွန်အပြေးနည်းကတော့ ပဉ္စမမြောက် အမောပန်းဆုံးပါတဲ့။
Apr 1, 2007, 9:21:00 AM
Apr 2, 2007, 7:09:00 AM
Jun 14, 2012, 2:52:00 AM